Inwe nwoke na nwoke: Inwe mmasi | Cinseltr.Xyz
Inwe nwoke na nwoke: Inwe mmasi
Ọ bụghị ihe ọhụrụ ndị nwoke inwe mmetụta dị ka ọnyà ná ndụ ha, ọ bụghị mgbe a bịara ịchọpụta ma ọ bụ ịchọpụta akụkụ ọhụrụ na mmekọahụ ha. Outpụ ọnya ahụ agaghị adị mfe mgbe niile, ọkachasị ma ọ bụrụ na di gị ma ọ bụ nwunye gị emeghị nke a. Naanị n’ihi na isi n’ọnyà ahụ pụta – nke na – abụghị (ọ bụgodi na-egosipụtakarị ya) otu ihe ahụ na nsogbu nke oge ndụ – nwere ike ibute ọtụtụ mgbanwe na ndụ gị. Maka unu abụọ, n’ezie.
Ihe atụ doro anya kachasị bụ ọnọdụ ebe ụmụ nwoke lụrụ nwanyị “na-achọpụta” na mberede “na ọ bụ nwoke nwere mmekọ nwoke na nwanyị ma ọ bụ nwoke na nwanyị. Nke a abughi ihe mberede, obughi Nchoputa, mana n’ezie umu nwoke ndi a na ajuju imeju isi ya n’ihi ihe ndi ozo, ha nwere ike buru ya iwe. Ma nke a anaghị eme kpọmkwem na ọnọdụ agụụ mmekọahụ – kamakwa n’akụkụ ndị ọzọ metụtara mmekọahụ, dị ka Discochọpụta ma ọ bụ ịchọpụta mmetụ obi BDSM, ịgafe mmiri ma ọ bụ ịchọpụta na ụmụ nwanyị ndị ọzọ dịkwa, na enwere ike ịnwe ohere na ndụ gị. (na obi) maka ihe karịrị otu.
“Trapzọ ndụ” – nke a bụ ihe a na-ahụkarị dịka ihe anaghị amasị ya – bụ ihe na-adọtabeghị ọtụtụ nlebara anya. Agbanyeghị, ọ dị mma ịsị na enwere ike iji ya tụnyere ọnọdụ nke nwanyị ahụ, mgbe ọ mụsịrị ụmụ, chọrọ ịlaghachi n’okpukpe akụ na ụba ma ọ bụ nke mmekọrịta ma chọpụta na ọ na-agbanye n’ọtụtụ mmepe na ọ gaghị enwe ike ịme ihe ọ chọrọ n’ezie n’ihi nhọrọ ndị dị na mbụ na ndụ (nke a nwere ntakịrị ihe gbasara ya na meno-pause dị ka ọnyà nwoke nwere metụtara nsogbu etiti ndụ, ọ bụ ezie na ihe ndị a niile nwere ike ime karịa ma ọ bụ obere n’otu oge ahụ. na ndu gi). Ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị agaghị enwe ike ịgbanahụ ọnyà ahụ na-enweghị nhọrọ dị egwu na ndụ ha.
Ọ bụghị iwu na ọ ga-abụ ihe dị egwu – ọ dabere na ọnọdụ gị. Naanị mmadụ ole na ole “gbapụ” ọnyà ahụ n’ihi mgbanwe ndị ọzọ na ndụ ha, dịka ịchọta ọrụ ọhụrụ na akara aka na ndụ ọ bụ ezie na ị bụ nne na nna, ma ọ bụ were ọmụmụ ihe ịchọrọ ime, ma ọ bụ mgbanwe ọrụ, nke – ọ kachasị maka ụmụ nwoke – o yikarịrị ka ọ ga – eme n’agbata 40 na 50. Ọ bụrụ na i tozuru etozu maka ọkwa ma ọ bụ ọkwa, ọ ga – anọ n’afọ ahụ. N’ebe ndị ọzọ nọ, ọ ga-abụ nsogbu, karịchaa ma ọ bụrụ na ọnyà ahụ metụtara mmekọahụ gị kpọmkwem ma ọ bụ nwee nnukwu mmetụta na ya.
Mgbidi mgbidi siri ike
Site na echiche nwoke – nke a bụ ihe anyị na-ekwu maka ya ebe a – ihe mbụ ị nwere ike ịbanye na ya, bụ mgbidi nchekwa HUGE nke onye gị na ya ga – ewulite, ọ kachasị mgbe ọnya ahụ nwere ihe metụtara mmekọahụ. Ọtụtụ ụmụ nwoke, ọbụladị na-anwa ịtụle isiokwu ndị dị otu a, oge ụfọdụ, ga-anụrị arụmụka “erughị m oke” n’oge ụfọdụ – ugboro ugboro karịa otu ugboro. N’ọtụtụ oge nke ahụ na ụda nke mkpọchi ihu ga – abụ ihe ikpeazụ ha na – anụ, n’ihi na ọ bụ ebe ahụ ka mmekọrịta ahụ ga – ejedebe.
Ọ bụ ezie na ụmụ nwoke ahụ chere na ọ (na-achọ ịkwụwa aka ọtọ]banyere onwe ya, onye ya na ya ga-eche na e mejọrọ ya na mgbe niile “tọgbọrọ” na nkwukọrịta bụ ihe siri ike ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume kpamkpam – ogologo oge na ma eleghị anya rue mgbe ebighi ebi. Ma ebe “ọnya” ahụ abụghị ihe a chọpụtala nke ọma, ịchọta enyemaka ma ọ bụ ihe ngwọta na-esote ọ gaghị ekwe omume. Gị onwe gị ga-edozi ya n’onwe gị, otu ụzọ ma ọ bụ n’ụzọ ọzọ.
Nke a bụ oge mgbe “ihe” malitere ime ma ọ bụ mgbe “ịntanetị” batara – nzukọ nzuzo na-anọ n’ime ụlọ nkata, na klọb Intanet na ọtụtụ Fora ndị ọzọ. Ọ dị mma, anyị na-ekwughachi ya ọzọ, A B NOTGH CR IMID-RAID! Ọ na – enwe mmetụta ịtọghe na nhọrọ nke gị nwere ike ọ bụghị mgbe niile ka ọ bụrụ nke gị ma ọ nweghị ihe ọ bụla metụtara mgbanwe hormonal ma ọ bụ eziokwu na ị na – efufu ntutu ma ọ bụ na – amaghị nwoke – n’agbanyeghị na ihe niile nwere ike ime n’otu oge. Ndụ ọtụtụ ụmụ nwoke bụ ogologo nke mkpebiri ikpe na nhọrọ okpu ziri ezi n’oge ahụ mana nke ahụ nwere ike ịgbagha ya ma emesịa. Nhọrọ Carreer, nhọrọ ndị mmekọ, nhọrọ ego na ọtụtụ ndị ọzọ. Isi ya – itinye onwe ya n’ihi mmemme mmemme – mmekọrịta dị kemgbe na-akpata ego, na-ewuli ma – ọbụnadị ihe kachasị mkpa – na-akwado ezinaụlọ ya ma ugbu a ọ na-eme ihe niile ọ chere na ya efuola ndị enyi ochie na ohere furu efu na ịchọpụta. Na enwere ihe karịrị ndụ karịa ọrụ, nchekwa ego na ezinụlọ ịkwado. Nwa agbọghọ ya nwanyị na-amalite ịmalite ịrọ nrọ ya ọzọ, ya na echiche ochie, ịkụ azụ ma ọ bụ njem njem, ezigbo ụbọchị egwuregwu na Ugboro (ọ bụrụ na ọ nwere ụdị azụ a) “ụbọchị obi ụtọ ya na Buddies ya na ndị agha”). Ihe ndị a niile na – enwe ọ happyụ na n’ọnọdụ Rosy-red.
Ihe ọ na-eme na-achọ oghere. Nchikota ato – ihe di nkpa – ihe:
1. (re) mmesi obi ike banyere nhọrọ ya
2. imeghe maka ohere ọhụụ
3. (re) ventchekwa onwe ya
Ọ bụ ezie na ọ nọ naanị ya (ebe ọ nwere ike o nweghị onye ga – emesi ya obi ike mgbe ọ na-ahọrọ ihe ndị ọ na-eme ná ndụ), ọ na-eche na ọnọdụ ọnụnọ ya dị – enweghị ike ịhapụ mmekọrịta ya (n’ihi na ọ LAGHACHI enweghị ihe ọ bụla na-enweghị isi na ya. ikekwe ọ chọghị), enweghị ike ịhapụ ọrụ ya (ọzọ n’ihi ihe nsonaazụ nke onwe ya na nke akụ na ụba yana ikekwe ọ bụghị naanị maka onwe ya), na-enweghị ike ịhọrọ ihe ọ na-eme (n’ihi na ọ nọ n’ọnọdụ) na enweghị ike ịme ụlọ. maka onwe ya (n’ihi ọtụtụ mmekọrịta ọha na eze, akụ na ụba na ezinụlọ yana NA mgbidi nchebe).
Ntre, nso ke akpanam? Ọ ga-achọ ebe ụkwụ dị. Ọ ga – emecha zụọ onwe ya na ya onye na –eche na enweghi mmasi ma ọ bụ dịka adịghị ike. N’ezie, o yikarịrị ka ha ga – eche na nke a bụ nnukwu ihe (dị ka ‘ụlọ’ nwere ike na – aghọ aghụghọ na nwunye ya, mana ọ naghị adị ka ịghọ aghụghọ ule, ọ na – adị ka oghere onwe ya ka ama nke ọma).
Ọ baghị uru ọ bụla – ma ọ bụrụ na “ọnyà” ahụ nwere mmekọ nwoke na nwanyị, ihe ọ bụla n’ụzọ – ịchọrọ ibute usoro dịka: were ọrụ ntụrụndụ, chọta agụmakwụkwọ ma ọ bụ iso ndị enyi gị nwee mmanya. Ma ọ bụghị ya bụ Al Bundy. Ọ na-enwe mmetụta dị ka ọnyà ma na-achọ ka ewere ya na ọnyà ahụ dị mkpa, ọtụtụ mgbe n’agbanyeghị ihe ndị ga-esi na ya pụta (n’ụzọ ọzọ: ịgba alụkwaghịm).
Ogologo uzo na ihe mgbu
Ma ọ na-akawanye njọ. Ọnyà ahụ ga-aghọ ọnyà n’onwe ya. O siri ike na mmadụ ọ bụla chọrọ ịgba alụkwaghịm, n’ihi na ọ na-emegide ihe ọ bụla a kụziiri ya, ihe ọ bụla etinyere ma na-esi na ya pụta ihe ọ bụla (o chere na ya) na-akwado ya. Nye ọtụtụ ndị ikom na-agba alụkwaghịm (onwe) ịgba alụkwaghịm. Yabụ na mgbe ọ chọpụtara eziokwu ahụ na ọ dị ya ka ọ tọrọ atọ ma nwaa ịchọ ụzọ ọ ga-esi pụọ ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ikwurita ya wee chọta nghọta, ọnyà ahụ n’onwe ya na-aghọ ọnyà ọhụrụ.
Otu ụzọ ọpụpụ – ewezuga ụzọ siri ike, dịka ịgba alụkwaghịm – bụ site na nkwukọrịta dị ogologo ma na-egbu mgbu. Usoro na-egbu mgbu ma na-esiri ma ndị mmekọ ike – agbanyeghị na – enweghị atụ. Ọ bụrụ na ọ dị ya ọnyà, ọ ga-enwe ihe mgbu (ma ọ bụ ihe mgbu nke ịgba alụkwaghịm, ihe mgbu nke ọrụ gbanwere ma ọ bụ ihe mgbu nke nkwukọrịta ahụ). Enweghị ụzọ isi zere ya – ọ bụrụ na ọnyà ahụ dị: chee ya ihu!
Enwere ndụmọdụ gbasara izugbe? Mba, obughi otutu – ma ewezuga ikike iche na ọnọdụ otu onye, ​​nke na – adigide, nke di na nwunye nwere ike ọ bụghị maka mmadụ niile. N’ezie, ọnụ ọgụgụ ịgba alụkwaghịm ọgbara ọhụrụ na-egosi na “n’atụghị egwu mgbe ọ bụla” bụ n’ezie pere mpe ma n’oge na-adịghị anya a ga-eme ka ọ bụrụ “mmadụ ole na ole nwere obi ụtọ”. N’elu nke a – ọtụtụ akụkụ nke ọha mmadụ nke oge a (mgbanwe teknụzụ, agbụrụ akụ na ụba, ezinụlọ na-enweta ego okpukpu abụọ, ihe ọmụma na-ejupụta na ihe ndị dị otú ahụ) na-abịa n’elu nke ahụ na mkpọchi okwu 1960 “Kwụsị ụwa, Achọrọ m. ịpụ ”nwere ike ịbụ eziokwu karịa mgbe ọ bụla.
N’otu oge ahụ: “mmekọrịta ọdịnala” (nke bụ eziokwu abụghị na “ọdịnala” ma ọlị, kama ọ bụ naanị ihe mepụtara nke dị naanị afọ 100) bụ nke ọtụtụ mmekọrịta dochiri anya: nwoke nwere mmasị nwoke, nwanyị nwere mmasị nwanyị, onye na-abụghị nwanyị. ndị lụrụ di na nwunye, ndị na-alụ ọgụ na-alụ ọgụ, ndị dị ndụ, na-ama ụma alụ nwanyị, ị kpọrọ ya aha. Nke pụtara na mgbe a bịara ilele anya ihe “mmekọrịta” ga – abụrịrị na – agbanwe agbanwe. Fọdụ ndị ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze na-ekwu na ndị na-enye ụmụaka ara na ndị hiburu ụzọ na-amalite ugbu a ịmalite ụdị mmekọrịta dị n’etiti azụ na 1960 na 70s. Naanị akụkọ ihe mere eme ga-akọ ma ha ziri ezi ma ọ bụ na-ezighi ezi. Eziokwu bụ na enwere mgbanwe na nke ahụ, ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị tọrọ atọ, ikekwe ị ga-eme ihe gbasara ya.
Inwe mmasi nwoke Sexuality sexuality education
06 Mayıs 2020 - 06:14
« Maneviyat ile uzlaşma
Cinsel ve Cinsel İstismarınızı Geliştirin »